တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...? ပိုစတာသည် LEGO အတွက်အရင်းအမြစ်ကိုပြသည် Marvel မင်္ဂလာပါ
04 / 10 / 2021 05 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 233 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ဇာတျသိမျး, Gamora, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego Marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, အသေးစား, သေးသေးလေး, နံရံကပျကျွွောငာ, ဆန်းစစ်ခြင်း, Thanos, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
အရင်းအမြစ်တစ်ခုအတွက်ဖြစ်သည် Lego Marvel Collectible Minifigure သည်လာမည့် If If အတွက်ပိုစတာအသစ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး
ရာသီနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မတိုင်မီ Marvelဘာဖြစ်လဲ ... ? စီးရီး, နောက်ထပ် minifigure in 71031 Marvel စတူဒီယို ဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်ပိုစတာအသစ်မှာသူတို့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကြယ်ပွင့်ရှိခဲ့တယ်။ Gamora သည်နောက်ဆုံးအပိုင်း၌ပြလိမ့်မည် ပထမအရစ်ကျ ဘာလဲဆိုရင် ... ? ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် Thanos ၏ချပ်ဝတ်တန်ဆာကို ၀ တ်ဆင်သည်။
နောက်ဆုံးအဆင့်၌သူမ၏အခန်းကဏ္ကိုထုတ်ဖော်မပြောသေးသော်လည်းသူမ၏ရုပ်သွင်ကိုအတည်ပြုခြင်းကသေးငယ်သောရုပ်ပုံတစ်ခုစီ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ 71031 Marvel စတူဒီယို ယခုရနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်မကြာမီပြည့်လိမ့်မည်။ ဤအရာကိုသင်ယခုအက္ခရာများအပြည့်အစုံကို၎င်းတို့၏မူလအသွင်အပြင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပြီး၎င်းတို့အတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတန်ဖိုးထားနိုင်သည်။
Gamora ရောက်လာသည်။ ဒီရာသီနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာသူမကိုကြည့်ပါ Marvel စတူဒီယို #တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်လွှင့်သည် @DisneyPlusuk. pic.twitter.com/zpq7jxxnn9
- Marvel ဗြိတိန်နှင့်အိုင်ယာလန် (@Marvelဗြိတိန်) အောက်တိုဘာလ 4, 2021
ငါတို့မှာရှိတယ် အနုပညာလမ်းညွှန် ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်၏ရှေ့တွင်ဖတ်ရန်နှင့် Gamora minifigure အသစ်သို့သင့်အားဤဘက်စုံဘက်စုံသုံးဗားရှင်း၌အန္တရာယ်အရှိဆုံးအမျိုးသမီး၏အရွယ်အစားပြောင်းလဲထားသော ၀ တ်စုံအသစ်သည်အဘယ်ကြောင့်ရှိသည်ကိုရှင်းပြရန်ကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည်။
သူမရဲ့ဇာတ်ကောင်ရဲ့ဘယ်ဘက်အောက်ခြေမှာ art ပိုစတာ၌ Blade of Thanos ကိုတွေ့နိုင်သည်၊ သူသည်ဇာတ်လမ်းတွဲ၌ထူးခြားသောလက်နက်ကိုသုံးလိမ့်မည်ဟုအတည်ပြုသည်။ What If ၏နောက်ဆုံးအပိုင်း၏အဖြစ်အပျက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင်ဤအရာကိုအကောင်း (သို့) အဆိုးဘက်တွင်သုံးမည်လား၊ သို့ဆိုလျှင်အဘယ်မျှကာလကြာရှည်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မအံ့သြနိုင်ပါ။
ပိုပြီးအပေါ်များအတွက် Lego Marvel ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ…? ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မတိုင်မီကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းကိုစစ်ဆေးပါ In-depth ပြန်လည်သုံးသပ် of 71031 Marvel စတူဒီယို လည်းပဲ သုံးသပ်ချက် ပြပွဲပေါ် မူတည်၍ နှစ်စုံတစ်ဖွဲ့အတွက် 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper.
← Lego Ideas အလင်းရောင်အပြင်အဆင်အသစ်တစ်ခုကိုစတင်လိုက်ပါပြီ Star Wars အဖြစ်အပျက်
တစ်နေ့တာ၏အုတ်ပုံ - Skater boi →